एम्स्टर्डम मा वकील | कानून, अटर्नी-ए-कानून, Law & More
के तपाई व्यवसायी हुनुहुन्छ वा निजी व्यक्ति विशेष ज्ञान खोज्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत सम्पर्क नदेखीकन? त्यसो भए Law & More तपाईको लागि एम्स्टर्डममा कानून फर्म हो। Law & More एक गतिशील, बहु-अनुशासित कानून फर्म हो, एम्स्टर्डममा अवस्थित जुन एउटा ठूलो कार्यालयको जानकारिकतालाई जोड दिन्छ जुन तपाईंले बुटीक अफिसबाट अपेक्षा गर्नुहुने ध्यान र अनुरूप सेवाको साथ ठूलो अफिसको जानकारि संयोजन गर्दछ। र जबकि अन्य कानून फर्महरु मात्र कानूनी सहायता प्रदान गर्दछ, को वकिलहरु Law & More एक कदम अगाडि जानुहोस्। एम्स्टर्डममा हाम्रा विशेषज्ञहरूले कानुनी सहायता प्रदान गर्दैनन् र सल्लाहकार वा मुद्दा चलाउने सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गर्छन्, तर वकिलहरू Law & More कानूनी क्षेत्रमा तपाइँको झगडा गर्ने पार्टनरको रूपमा सेवा पनि दिनुहुन्छ।
एम्स्टरडममा एक मालिकको आवश्यकता छ?
के तपाई व्यवसायी हुनुहुन्छ वा निजी व्यक्ति विशेष ज्ञान खोज्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत सम्पर्क नदेखीकन? त्यसो भए Law & More तपाईको लागि एम्स्टर्डममा कानून फर्म हो। Law & More एक गतिशील, बहु-अनुशासित कानून फर्म हो, एम्स्टर्डममा अवस्थित जुन एउटा ठूलो कार्यालयको जानकारिकतालाई मिल्दछ जुन तपाईंले बुटीक अफिसबाट अपेक्षा गर्नुहुने ध्यान र अनुरूप सेवाको साथ एक ठूलो अफिसको जानकारि संयोजन गर्दछ।
> को विशेषज्ञता Law & More
> एम्स्टर्डममा कानून फर्म
र जबकि अन्य कानून फर्महरु मात्र कानूनी सहायता प्रदान गर्दछ, को वकिलहरु Law & More एक कदम अगाडि जानुहोस्। एम्स्टर्डममा हाम्रा विशेषज्ञहरूले कानुनी सहायता प्रदान गर्दैनन् र सल्लाहकार वा मुद्दा चलाउने सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गर्छन्, तर वकिलहरू Law & More कानूनी क्षेत्रमा तपाइँको झगडा गर्ने पार्टनरको रूपमा सेवा पनि दिनुहुन्छ। हामीसँग एक कडा, विशेष वकीलहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै पनि तरिकामा तपाईंको कानुनी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न तयार छ। के तपाइँ हाम्रो कार्य गर्ने विधि बारे उत्सुक हुनुहुन्छ? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कल गर्नुहोस् 31१ 20० 369 71 21 ००
आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डममा कानून फर्म
को विशेषज्ञता Law & More एम्स्टर्डममा
कानुन फर्मको रूपमा Law & More कर्पोरेट कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून र प्रविधि, साथै श्रम कानून, अध्यागमन कानून र पारिवारिक कानूनको क्षेत्रमा सक्रिय छ। के तपाईं कानूनको अर्को क्षेत्र खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए हाम्रो विशेषज्ञ मूल्यांकन पृष्ठमा हेर्नुहोस् जुनमा कानूनका सबै क्षेत्रहरू सूचीबद्ध छन्। हाम्रो वकिलहरू सबै उल्लेख क्षेत्र मा विशेषज्ञ छन् र कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी छन्। जब यो कम्पनीहरूमा आउँछ, Law & More उद्योग, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य सेवा र खुद्रा जस्ता विभिन्न शाखामा उद्यमीहरूका लागि कार्य गर्दछ। थप रूपमा, एम्स्टर्डममा हाम्रो वकिलहरूको अभिनव कम्पनीहरूको लागि काम गर्ने र मद्दत गर्ने वा स्टार्ट-अपहरूलाई मार्गनिर्देशित गर्ने धेरै अनुभव छ। हाम्रो वकिल टेक्नोलोजी, अनुसन्धान, विकास, बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार स्थापना, इजाजतपत्र र विस्तार आविष्कारको क्षेत्रमा काम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एम्स्टर्डममा कानून फर्म
डच (प्रक्रियात्मक) कानूनको बारेमा हाम्रो विस्तृत ज्ञानको थप बाहेक, हाम्रो कानून फर्म हाम्रो सेवाहरूको दायरा र प्रकृतिको हिसाबले वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय हो र परिष्कृत डच र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको एक श्रृंखलाको लागि काम गर्दछ, निगमहरू र संस्थाहरूबाट व्यक्तिहरूसम्म। हाम्रा ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भव सेवा प्रदान गर्न हामीसंग बहुभाषी वकिल र न्यायशास्त्रीहरूको समर्पित टोली छ, जसले रुसी भाषाको मास्टर गरेका छन् र अन्य कुराहरु पनि। तिनीहरू सुरुबाट कुनै कानुनी प्रक्रियाको अन्त्यसम्म तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न र मद्दत गर्न सक्षम छन्, उनीहरूको कामलाई सोचेको, उन्नत रणनीतिमा आधारित गर्दछ। जुनसुकै राष्ट्रियता, मा आधारभूत सिद्धान्त Law & More सबैलाई आफ्नो अधिकारको लागि खडा हुने अवसर हुनुपर्दछ। हाम्रो वकिलहरु हाम्रो ग्राहकहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो संभव मूल्य-गुणवत्ता अनुपात को लागी प्रयास गर्दछ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ एक उच्च स्तर मा कानूनी सहायता प्राप्त र तपाइँको लगानी को लागी भुक्तान हुनेछ।
त्यसोभए, जहाँ सामान्य वकिलहरूले कानुनी ज्ञान र आलोचनात्मक आँखा मात्र प्रदान गर्छन्, एम्स्टर्डममा हाम्रो वकिलहरूले अन्य कानून फर्महरू भन्दा बढी सेवा प्रस्ताव गर्दछन्। Law & More एम्स्टर्डममा टीमले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्पनीहरू र निजी व्यक्तिहरूको लागि व्यावहारिक र व्यक्तिगत तरिकामा काम गर्दछ। एम्स्टर्डममा हाम्रो अफिसमा हामीसँग लामो खुल्ने समय छ र बेलुका र सप्ताहन्तमा हामी खुला छौं। हाम्रो वकिलहरु छिटो काम गर्न अभ्यस्त छन्, ताकि तपाईले आफ्नो इ-मेलको उत्तरको लागि कहिले पनी लामो पर्खनु पर्दैन वा फोनमा हाम्रो कर्मचारीहरु मध्ये एक हुनु भन्दा पहिले। अफिसको घण्टा बाहिर पनि तपाईं जहिले पनि हाम्रो वकिलहरू मध्ये एकमा पुग्न सक्नुहुन्छ। गति र विशेषज्ञता हाम्रो लागि सर्वोपरि महत्त्वको हुन्छ, जसको मतलब तपाईं सहज र लक्षित संचारमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। के तपाई हाम्रो सेवामा रुचि राख्नुहुन्छ? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। को वकिल Law & More तपाइँको सेवा मा छन्!
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ? Law & More एम्स्टर्डममा कानून फर्मको रूपमा तपाईका लागि गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यसो भए हामीलाई फोन contact११ 31० 20 369 ०० बाट सम्पर्क गर्नुहोस् वा इ-मेल पठाउनुहोस्: